Nankatoavina Ho Afa-Mirotsaka Hofidiana Indray i Evo Morales Ao Bolivia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2013 1:00 GMT
Nodiovin'ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana (TCP araka ny fanombohan'anarany amin'ny teny Espaniola) ny lalana mankany amin'ny fifidianana indray an'i Morales’ tamin'ny faran'ny volana Avrily 2013 rehefa nanambara [es] fa ny efatra amin'ny andini-dalàna enina, ka tafiditra amin'izany ny famelana ifidianana indray an'i Morales sy Linera, dia mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana. Hoy ny fanazavan'i Emily Achtenberg ao amin'ny bilaogin'ny NACLA Rebel Currents,
Nandidy ny fitsarana fa afa-miditra hifaninana ho amin'ny fe-potoana fahatelo misesy i Morales, na dia fe-potoana roa ihany aza no avelan'ny Lalàmpanorenana 2009, satria ny fotoana nifidianana azy voalohany (2004) dia mbola nandritra ny Lalàmpanorenana teo aloha. Nodifian'ny didim-pitsarana ny efa voasoratra ao amin'ny Lalàmpanorenana vaovao fa tokony ho mikaonty avy hatrany ny fe-potoana efa vita teo aloha. Nosainin'ny fitsarana fa tsy mihatra amin'i Morales io filazana voasoratra ho amin'ny fiampitana mankany amin'ny lalampanorenana vaovao io satria tsy nipaka tany amin'ny fampiharana ny Lalampanorenana vaovao ny fe-potoana voalohany niasany (nohafohezin'i Morales herintaona tokoa ny fe-potoana voalohany niasany ary voafidy indray tao anatin'ny Lalampanorenana vaovao izy)
Navoitran'i Emily ihany koa ny tsikera nilaza ny Filoha “tokony nanao fanitsiana ny Lalampanorenana mialoha ny hifaninanany ho amin'ny fe-potoana fahatelo.”
Filoha Evo Morales nandray ny asa tao La Paz tamin'ny 22 Janoary 2010. Sary nozaraina tao amin'ny Flickr avy amin'ny Presidencia de la República del Ecuador (CC BY-NC-SA 2.0)
Raha mihorakora-pifaliana amin'izany didin'ny fitsarana izany ny mpanohana an'i Morales, mitsikera izany kosa ny bilaogera Boliviana tahaka an'i Andrés Gómez Vela [es] sy Eduardo Bowles [es] . Niteny i Andrés fa tsy nahombiazana tamin'ny fitsapana amin'ity raharaha fototra ity ny mpitsara, raha nanoratra i Eduardo fa raha eo amin'ny lafiny lalàna, ny fanapaha-kevitra hanaiky ny hirotsahana fahatelo no iray amin'ny fihemorana goavana indrindra ho an'ny lalampanorenana demokratikan'ny firenena. Ankoatra izay, nampitandrina izy fa mety hamelona fotoa-pikorontanana vaovao ity didy nivoaka ity.
Nanampy i Emily ao amin'ny Rebel Currents,
Raha ifotorana eo amin'ny fitsapan-kevitra ankehitriny, izay manome ny fanohanana 60% an'i Morales any amin'ny renivohitra departemantaly sy 76% any amin'ny faritra ambanivohitra, tokony ho ny fanitsiana lalampanorenana no nampanjakaina. Tamin'ny fidifiana ny lalan'ny Lalampanorenana, mandresy lahatra ny mpitsikera fa tsy ny mpanohitra ara-politika ihany no nofitahiny, fa ny vahoaka Boliviana, izay nandrotsa-bato hanohana ny Lalampanorenan'ny marimaritra iraisana, ka ao anatin'izany ny fetran'ny fe-potoana izay voahozongozona, any ho any amin'ny 61%.
Amin'ny fifidianana ho avy, dia nanambara ampahibemaso i Morales fa manantena hahazo hatramin'ny 74%, hahazo ny tampon'ny vato 54% tamin'ny 2005 sy 64% tamin'ny 2009.
Na dia izany aza dia nanambara ny Bloggings by boz fa na dia eo aza ny fitiavan'ny olona an'i Morales dia tsy tokony hifaninana izy:
Tokony hihazakazaka ve izy? tsia angamba. Fahadisoana na vitan-dratsy ara-toekarena mandritra ny fe-potoana fiasana fahatelo dia mety hamasoka ny lova navelany sy hanimba ny fiovana efa vitany. Ankoatra izay, raha mifaninana hiditra amin'ny fe-potoana fahatelo i Morales dia mitovy fahadisoana amin'i Hugo Chavez. Miankina tanteraka amin'ny fomba fitarihany izy fa tsy manangana andrim-panjakana sy mpitarika mitovy firehana aminy hitondra ny asany. Tsy ampy fahafoizan-tena ny hetsika na firenena miankina amin'olona iray.
Hifidy filoha vaovao ny Boliviana amin'ny Desambra 2014. Mandritra izany fotoana izany, manahy ny hahamafy kokoa ny fifampihenjanana ny mpiserasera noho ny fitokonana sy ny hetsi-panoherana misy ankehitriny, fifandirana izay mety hanembatsembana ny herijikan'ny filoha Morales handresy amin'ny fifidianana filoham-pirenena fahatelo ataony.